Sidee loo gaari karaa dheelitirka u dhexeeya SEO iyo suuq-geynta ganacsiga?
Sida mulkiinka dukaanka ecommerce, waxaad ogtahay sida ugu muhiimsan ee ay tahay in lagu helo kalsoonida macaamilka si markaa dalxiisayaal badan ay go'aansadaan inay kaa soo iibsadaan. Marka aad bilowdo kor u qaadida dukaankaaga internetka, yoolkaaga hoose waa inuu ahaadaa bartilmaameedka dadka isticmaalaya kuwaas oo doonaya inay iibsadaan. Habka ugu fiican ee aad u qaban kartid waa adigoo isticmaalaya SEO-gaaga bogga internetka ee ekaanshaha.
Maanta, waxaan kuu sheegi doonaa farsamooyinka ugu fiican si loo gaaro isu dheelitirka u dhexeeya SEO iyo suuq-geynta ganacsiga. Akhri akhri si aad u ogaato sida aad labalaabi kartid taraafikadaada shabakada internetka waqtiga ugu gaaban. Hagaha Hagaha ee lagu Sameeyo Iskuduwidda Baaskiilada SEO iyo Ecommerce Marketing
Samee Cilmi-baaris Ku Saabsan
Ka hor , waxaad diirada saartaa garashada ereyada muhiimka ah ee dakhli dhalinta boggaaga - scivoli per bambini. Maalmahan, waxaa jira qalabyo badan oo SEO ah oo la yaab leh si loo raadsado gaadiidkaaga internetka. Dooro midka ku siin doona warbixinta dhammaan wareegga nolosha macaamiishaada. Way fiicnaan doontaa haddii warbixintu ay ku tusinayso kuwa isticmaala boggagaaga laakiin ha u badalin macaamiisha. Daraasada warbixinta, iyo laf dhabarta cinwaanka muhiimka ah ee tilmaamaya martida diyaar u ah inay iibsadaan alaabtaada. Marka aad sidan ku sameyso, jumladahaan u kala dhig labada tiirba:
Qodobbada muhiimka ah ee muhiimka ah;
Qodobbada muhiimka ah ee muhiimka ah.
Qodobbada muhiimka ah ee muhiimka ah waa kuwa keena dakhliga iyada oo dhalinaysa gaadiid badan oo la beegsanayo. Tilmaamo tayo sare leh, liddi ku ah, ha keenin inta badan baabuurta. Si kastaba ha ahaatee, weedhahan ayaa soo jiidanaya macaamiisha adeegyadiinna iyo alaabooyinka leh kuwa ugu weyn. Labada nooc ee soo socda ee taraafikada ayaa midba midka kale isku mid ah, hagaajinta darajooyinka Google. Waa muhiim inaad isticmaasho markaad kor u qaadeyso dukaankaaga internetka ilaa ay ka caawiyaan dhisitaanka sumcaddaaga sida goob deg deg ah oo muddo dheer ah.
Kordhinta Tayada Soo-booqdayaasha
Marka ay timaado gaadiidka shabakadda, dadka intooda badani waxay diiradda saaraan lambarrada, tayada, taas oo gebi ahaanba qaldan. In kasta oo xaqiiqda ah in tayada aysan helin dareen badan sida tirada, xaqiiqadu waxay tahay in hore ay uga qiimo badan tahay tan dambe. Waa inaad fahamtaa in booqashooyinka kali ah aysan u dhigmin ganacsi faa'iido leh. Si aad lacag u sameyso, waa inaad beddeshaa kuwa soo booqda oo u rogaa macaamiisha. Nasiib wanaag, waxaa jira siyaabo badan oo aad u soo jiidan kartid macaamiisha. Ka bilaw hirgelinta wada sheekeysiga noolasha iyo calaamadaha caddaynta bulshada. Fikir kale oo weyn ayaa ah in la abuuro fiidiyowyo muuqaal ah oo xiiso leh. Sidoo kale, tixgelin sawirada alaabooyinka tayada leh - waxay yihiin qalab dhab ah oo ka mid ah bogagga alaabta. Isticmaalaan Lacagta Lacagta lagu Sameeyo Lacageed
Mid ka mid ah habab badan oo lagu gaari karo isu dheelitirka u dhexeeya SEO iyo suuq-ganacsiga waa inay diirada saaraan dadaalkaaga suuqgeynta keyword keywords keywords marka la jarayo ka baxa gaadiidka sare iyo isbedelka hooseeya ee abuura ereyo muhiim ah. Raadinta ereyada muhiimka ah ee aad ku qeexday talaabada koowaad waxay kuu noqon doontaa mid jaban sababtoo ah waxaad heli doontaa tiro yar oo ka mid ah wadarta isku dhufashada. Waxaa intaa dheer, waxay sidoo kale noqon doontaa faa'iido badan maxaa yeelay waxaad soo jiidaneysaa isticmaalayaasha diyaar u ah inay iibsadaan. Xitaa haddii hawlaha kor ku xusan ay ku qaadato dadaal badan, markaad si sax ah u hesho, way kuugu fududaan doontaa inaad sii wado.Ilaa intaad ku sii jirayso koodhka ugu muhiimsan ee la beegsanayo, goobtaada ganacsigaaga waxay billaabi doonaan inay soo saaraan dakhli heer sare ah.